Uyazi ukuthi izingane ezingaphezu kwezigidi eziyi-3.03 e-United States zitheleleke nge-novel coronavirus. Bheka ngomusa izindaba ze-CFM namuhla. | UJesson
Uyazi ukuthi izingane ezingaphezu kwezigidi eziyi-3.03 e-United States zitheleleke nge-novel coronavirus. Bheka ngomusa izindaba ze-CFM namuhla.
1. [Bank of America] Inhlolovo yemenenja yesikhwama sangoFebhuwari ikhombise ukuthi ukwabiwa kwamasheya nempahla kwafinyelela ezingeni eliphezulu kakhulu kusukela ngoFebhuwari 2011. Ukubanjwa kwemali kwabaphathi beziKhwama kwehle kwaba ngamaphesenti angu-3.8, okuyizinga eliphansi kakhulu kusukela ngaphambi kokuba kuqale “ukwethuka” ngoMashi 2013.
2. Ihhovisi le-Congressional Budget: esikhathini seminyaka engama-30, umthwalo wezikweletu wase-United States uzophinda kabili umkhiqizo wawo wezomnotho waminyaka yonke. Ngo-2051, isikweletu sikahulumeni saseMelika sizoba ngu-202% we-GDP, cishe kabili kunaleso esikhona manje. Ngokokuqala ngqa kusukela ngeMpi Yesibili Yomhlaba, izinga lesikweletu lase-United States leqa u-100% we-GDP ngonyaka owedlule, kanti nezinga lesikweletu elizayo lase-United States kulindeleke ukuthi lephule umlando walo.
3. Inhlangano Yezempilo Yomhlaba: imizuliswano yesi-12 neyesi-13 yokuqubuka kwe-Ebola yenzeke eDemocratic Republic of the Congo (DRC). Ukulandelana kofuzo kwegciwane lendawo le-Ebola kwenzelwe ukubona ukuthi ukuvuseleleka kungenxa yamacala angenzeka noma ukudluliselwa okusha kwesilwane kuya kumuntu. Ukugonywa ngobuningi kuncike kohulumeni nasekutholakaleni kokugoma. Kukhishwe izixwayiso emazweni ayisithupha azungezile njengeSierra Leone neLiberia ukuthola amacala angahle abe khona.
4. Abezindaba baseMelika: ngokuya ngemininingwane yocwaningo ekhishwe yi-American Academy of Pediatrics, kusukela ngoFebhuwari 11, izingane ezingaphezu kwezigidi ezingu-3.03 e-United States zitheleleke nge-novel coronavirus, ebalwa cishe ngama-13% enani eliphelele lamacala aqinisekisiwe ngu-COVID-19 e-United States. Ngesonto eledlule kuphela, inani lezingane ezitheleleke nge-novel coronavirus belingama-90, 000.
5. Isikhungo Sezezimali Samazwe Ngamazwe: ngo-2020, ubhadane lwe-COVID-19 lwenyuse isikweletu somhlaba wonke ngama-US $ 24 trillion saba irekhodi lase-US $ 281 trillion, ngesilinganiso somhlaba wonke sesikweletu kuya ku-GDP esingaphezu kuka-355%. Izinhlelo ezisekelwa nguhulumeni zibe yingxenye yalokhu kwanda, kanti isikweletu sezinkampani zomhlaba wonke, amabhange nezindlu sikhuphuke ngo-US $ 5.4 trillion, US $ 3.9 trillion no-US $ 2.6 trillion, ngokulandelana.
6. UNobhala Wombuso wase-US uLincoln utshele uMkhandlu Wezokuphepha we-UN ukuthi iMelika izokhokha imali engaphezulu kwezigidi ezingama-200 zamadola aseMelika kubulungu bayo kwi-World Health Organisation ekupheleni kwale nyanga. “Lokhu kukhombisa ukuzibophezela kwethu kwakamuva kwi-World Health Organisation (WHO) ukuqinisekisa ukuthi i-WHO ithola ukwesekwa okuyifanele ekuholeni ukubhekana nomhlaba wonke kumqedazwe we-COVID-19, futhi sisebenzela nokuguqula i-World Health Organization (WHO) ngekusasa , ”Kusho uBlinken. "
7. IBrazil: Umuthi wokugomela waseChina iSinopec COVID-19 uhlolwe ukuthi uyasebenza yini ekulweni ne-mutant novel coronavirus evela e-United Kingdom naseNingizimu Afrika. Ngo-17 Febhuwari, iButantan Institute yaqala umkhankaso omkhulu wokugoma wabhekisa kubantu abadala bonke futhi yahlola ukuthi yehlisa izinga lokutheleleka. Ngenxa yokusetshenziswa kobuchwepheshe obungasebenzi, umuthi wokugoma owenziwe yiChina Science and Technology kulindeleke ukuthi ube nenzuzo ngaphezu kweminye imigomo.